दमकमा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त चुनावी प्रचार | नयाँ शक्ति नेपाल
दमकमा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त चुनावी प्रचार
दमक – झापाको दमक नगरपालिकामा सबै दलहरुले चुनावी गतिविधिलाई तीव्र बनाइरहेका बेला नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पनि संयुक्त चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् ।
नगरपालिका क्षेत्रमा संयुक्त चुनावी प्रचारमा खटेका दुई दलले दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा नयाँ शक्तिका सतिश साह र उपप्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरमका गंगा सागर शेर्मालाई अगाडि बढाएका छन् । दुई दलको संयुक्त चुनावी संयन्त्रले नगरपाकिलाको ८ वटा वडामा उम्मेदवार टुंगो लगाएको नयाँ शक्ति पार्टीका दमक नगरपालिका उत्प्रेरक योगेश उप्रेतीले बताउनुभएको छ ।
दुई दलले वडा नं. १ मा ओममाया आङ्दाम्बे, ३ मा डम्बर तिमिल्सिना, ५ मा राजु खड्का, ६ मा पुष्प खड्का, ७ मा गजेन्द्र लावती, ८ मा उमेश गजमेर एवं वडा नं. १० मा खगेन्द्र न्यौपानेलाई वडा अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो ।
उम्मेदवारको अलवा दुई दलले नगरपालिकामा चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन् । नयाँ शक्तिले उम्मेदवारी दिएको सबै वडाहरुमा पार्टी वडा कमिटी निर्माण गरिसकेको र बाँकी वडाहरुमा कमिटी निर्माण गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको नगर उत्प्रेरक उप्रेतीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिँदै दुई दलले संयुक्त रुपमा र्यालीसहित घरदैलो कार्यक्रम जारी राखेका छन् । जस क्रममा आइतबार बिहान दमक नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित हरिहर कोलोनीलगायत बजार क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
यो वडा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर हो । यहाँ नयाँ शक्तिका युवा व्यवसायी राजु खड्काले वडा अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नयाँ शक्तिले दमक नगरपालिका र वडा नं. ५ सहित केही वडाहरुमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउँदै लगेको छ ।